किन सोचेभन्दा तीव्र फैलिरहेको छ कोरोना भाइरस ? - Birgunj Sanjalकिन सोचेभन्दा तीव्र फैलिरहेको छ कोरोना भाइरस ? - Birgunj Sanjalकिन सोचेभन्दा तीव्र फैलिरहेको छ कोरोना भाइरस ? - Birgunj Sanjal
काठमाडौं । अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रकोप विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ । प्राय सबैजसो देशहरुले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि आफ्नो भएभरको शक्ति लगाएका छन् । तर यसको औषधि पत्ता लगाउन सकेका छैनन्, जसका कारण ज्यान गुमाउने र संक्रमितहरुको संख्या बढ्ने क्रम जारी छ ।
तर अमेरिकाको मासाचुइट्सको घटनाले भने कोरोना भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्छ भन्ने कुरालाई गलत सावित गरिदिएको छ । अहिले यहाँ ८२ मानिसमा यसको संक्रमण देखिइसकेको छ । जबकी यहाँका कुनै पनि व्यक्ति पहिले कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा थिएनन् । कोरोना संक्रमणको लक्षण पनि देखिएको थिएन । तर, अहिले मासाचुइट्समा मात्रै संक्रमितको संख्या ८२ पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म अमेरिकाका आधा दर्जनभन्दा बढी मानिसमा पनि यस्तो कुनै लक्षण नदेखिए पनि भाइरसको संक्रमण फैलिएको पाइएको छ । अधिकारीहरुले यसअघि यो भाइरस लक्षण देखिएका मानिसबाट यो रोग सर्न सक्ने बताएका थिए ।
कुनै लक्षण नदेखिएका मानिसबाट पनि यो भाइरस अरूमा धेरै सर्छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ